Category: steem-bounty - @mmunited
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Steem-bount ရဲ့ နောက်ထပ် အစီအစဉ်တစ်ခုအကြောင်းရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းပိုစ့်ကို တော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
For english user please read the post directly using below link.
Steem-bounty အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ရမှာကတော့ မခက်ပါဘူး။ ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။ ကိုယ့်မေးခွန်းကို သူက ကြိုက်ရင် upvote ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ၁ SBD ကနေ ၁၀ SBD အထိရနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာစည်းကမ်းတွေကို ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်း ဒါမှမဟုတ် ပုစ္ဆာ တစ်ခုခုကို ပိုစ့်ထဲမှာ ထည့်မေးပါ။ သင်သိချင်တဲ့ မေးခွန်းကို မေးပါ။
ပြီးတော့ bounty ကို အနည်းဆုံး2SBD/2 Steem ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ ပိုစ့်လင့်ခ်ကို copy ကူးပြီး မူရင်းပိုစ့်မှာ comment ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၆ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး comment ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ English လိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ သူတို့ဖတ်လို့ရမှာပါ။
ဒီပိုစ့်မှာ 100 SBD ကို bounty အနေနဲ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးရှိတဲ့ မေးခွန်း မေးထားတဲ့သူတွေကို ၁% ကနေ ၁၀% အတွင်းပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် upvote ရတဲ့သူက 1 SBD ကနေ 10 SBD ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Social network ကနေ ဒီပိုစ့်ကို share လုပ်ပေးရင် 2% ထပ်ဆောင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပတ်တိုင်းမှာ အနိုင်ရတဲ့သူကို ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို ၂၀ ကနေ ၅၀ question ကိုပဲ upvote ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ၅ ပတ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမအပတ်ကတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အပတ်တိုင်း စနေနေ့မှာ project prometheus ကို updateလုပ်မှာဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Steemit networking challenge ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လူတွေ comment များများပေးလာအောင်လို့ မက်လုံးပေးတဲ့အနေနဲ့ comment ပေးတဲ့သူ ၅ယောက်ပြည့်တာနဲ့နဲ့1 Steem ကို bounty အနေနဲ့ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steembounty အကြောင်းသိချင်ရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ရှုနိင်ပါတယ်။ Sponsor ပေးချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဘယ်လို မှော်စွမ်းအားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလဲ။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ
What is the magical power do you want to possess? and Why?
Follow it you want to know update from.
Upvote this post to set more bounty.
ကိုယ့်ရဲ့ comment မှာ upvote ရလာမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ပိုစ့်မှာ upvote ရလာမယ်။
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ တတိယ အပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအပတ်ကတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အပတ်တိုင်း စေနေနေ့မှာ project prometheus ကို upvote လုပ်မှာဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Steemit networking challenge ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လူတွေ comment များများပေးလာအောင်လို့ မက်လုံးပေးတဲ့အနေနဲ့ comment ပေးတဲ့သူ ၅ယောက်ပြည့်တာနဲ့နဲ့ 0.5 Steem ကို bounty အနေနဲ့ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steembounty အကြောင်းသိချင်ရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ရှုနိင်ပါတယ်။ Sponsor ပေးချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဝတ္ထုတွေထဲမှာ ဘယ် ဝတ္ထုကို အကြိုက်ဆုံးပါလဲ။။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။